Blogger's Name : Pho La Nat Thar Ordinary Guy, interested in photography, but surviving the life as an Accountant. This Blogs want to shows my photos and my feeling about arts.
21/12/2012 မှာကမ္ဘာမပျက်လို့ စိတ်အညစ်ကြီးညစ်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်သတင်းကောင်းလေးပါးလိုက်ပါရစေ
၃။နောက်နေ့ ရုံးမတက်ရတော့ဘူးဆိုပြီးကမ္ဘာမပျက်လို့ ညစ်နေသူများ။
၅၊ကမာပျက်လျင်ဖြစ်တက်သောရေကြီးမြေပြိုသကဲ့သို့ သော အရသာမျိုးထပ်တူခံစားနိုင်ခြင်း။
ချီးတွင်း(အိမ်သာတွင်း)ဟောင်းထဲ့သို့ ပျော်ပျော်ပါးပါးခုန်ဆင်းပြီးသာသေပါလေ။ (အပျော်အပြက်ရေးသည်။တိုက်ဆိုင်လျှင်ခွင့်လွတ်ကြပါကုန်) ခိ။
Posted by Pho La Nat Thar at 6:24 PM No comments:
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းအသက်၃၀နီးတာရယ်၊ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကအသက်၃၀ပတ်လည်လူတွေရဲ့ အသံတွေကိုကြားရတာများလို့ ဒီစာကိုရေးဖြစ်တာပါ။
တကယ်တော့၃၀ဆိုတဲ့အရွယ်ကလူ့ ဘ၀သက်တမ်းရဲ့့တ၀က်နီးပါး။ဥစ္စာဓနကိုဖိဖိစီးစီးရှာဖွေရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီလေ။ တချို့ လည်းအိမ်ထောင်တွေကျ၊သားသမီးတွေရ၊တချို့ လည်းဘ၀အတွက်သင့်တော်တဲ့သူကိုရှာကြရတဲ့အရွယ်ပါ။အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကကြောင်းအရာကတော့ဒီအရွယ်မှာအနည်းဆုံးသင့်တင့်တဲ့အတက်ပညာနဲ့ သင့်တင့်တဲ့ဝင်ငွေရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလက်ဝယ်ရှိသင့်ပြီဆိုတာပါဘဲ။
လူဆိုတာငယ်တုန်းကျောင်းနေစဉ်ကာလမှာတစ်ယောက်ကသိပ်မသိသာပေမယ့်၊အသက်၃၀အရွယ်မှာတော့ဘ၀အခြေအနေတွေကတော်တော်လေးကွဲပြားလာကြပြီလေ။ဟိုလူကတော့စီးပွားရေးလုပ်ပြီးချမ်းသာနေပြီ။ဒီလူကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာဘာရာထူးနဲ့ လခဘယ်လောက်ရနေပြီဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့ လူလတ်ပိုင်းတွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့ topics တွေဆိုရင်မမှားပါဘူး။
ဒီpostမှာကျွန်တော်အဓိကရေးချင်တာကလက်ရှိကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်က၃၀ပတ်လည်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ခံစားချက်၊မျှော်မှန်းချက်တွေပါ။ ဒီနိူင်ငံကိုလာပညာတွေသင်၊အလုပ်တခုရအောင်ရှာ၊သင့်တင့်တဲ့ဝင်ငွေလေးကိုရှာနိုင်လာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဟုတ်ထင်နေခဲ့မိကြတယ်။ ကိုယ့်တစ်ကိုစာနဲ့ ဗမာပြည်မှာကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုအတွက်ကဟုတ်သလိုလိုရှိနေတာကိုး။ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တော့လည်းလင်ရယ်မယားရယ်shopping လေးထွက်လိုက်၊dinnerလေးစားလိုက်နဲ့ သာသာယာယာပါဘဲ။
နောက်တစ်ခုကကိုယ်ကဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားသားဆိုတော့ဘယ်တော့မှသူ့ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးမရနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံသားခံရင်တောင်ဧည့်နိုင်ငံသားဘဲဖြစ်မှာဘဲ။ PRဆိုတဲ့Statusကြီးကလည်းအခုအချိန်မှာလုံခြုံမှုမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။PRသက်တမ်းတိုးလို့ မရတဲ့အဖြစ်တွေတောင်ကြားလာရပါတယ်။
PR တွေချမပေးတော့တာရယ်။လက်ရှိPRတွေရဲ့ ကလေးကျောင်းလခ၊တခြားBenefitsတွေသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ အဆင့်ကွာအောင်လုပ်ပြစ်တယ်။အလွယ်တကူအိမ်ဝယ်လို့ မရအောင် Initial payment ကို 10%ကနေ20%တိုးပြစ်လိုက်တယ်။ဒါတွေဟာနိုင်ငံခြားသားတွေကိုလက်မခံခြင်လို့ တဖက်လှည့်နဲ့ လုပ်တဲ့အကွက်တွေပါ။
အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ လည်းစဉ်းစားလာရပါပြီ။နောက်တစ်ခေါက်သက်တမ်းတိုးလို့ မရရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ Backup Planတစ်ခုလိုလာပါပြီ။ဗမာပြည်ပြန်မလား။တခြားနိူင်ငံကူးမလား။ဒီမှာဘဲအခြေချမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေပေါ့။
Posted by Pho La Nat Thar at 12:49 AM2comments:
This photos are taken last week the time I went to Fortune Center for some business. I have been there so many time and taken photos of this areas . For this times, I had an idea to take windows of this old style buildings. Some of them are church, some are museums and galleries. All the building situated one the way from Bugis to Cityhall.
Posted by Pho La Nat Thar at 2:14 PM 1 comment:
Aung Myanmar Traditional Food Shop
This photos are taken for my friends food shop (Aung Myanmar). I don't think this photos are good and I understand that I still need to study about lighting and need to buy some lighting equipments for my photography. Actually table top photography is my main concern and I intend to create this kind of photos in future.
Anyway, you can see this photos at Aung Myanmar shop which situated at BLK 431, Clementi Avenue 4. Please come and eat at Aung Myanmar for those delicious Myanmar Foods.
Posted by Pho La Nat Thar at 9:11 PM No comments:
ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်အကြောင်း နဲ့ ယမကာ Part 1
အရက်ကိုစသောက်ဘူးတာတော့6တန်းတုံးကဘော်ဒါတစ်ယောက်ကဘားပလက်ပုလင်းထဲသူ့အဖေအရက်ခိုးထည့် ပြီးကျောင်းကိုယူလာလို့ မျှသောက်ကြတာ။ အတန်းပိုင်မိသွားလို့ အုပ်လိုက်ကြီးမိဘခေါ်ခံထိတာမှတ်မိသေးတယ်။ တကယ်စသောက်တော့၁၀တန်းစာမေးပွဲအပြီးဘိုးတော်ကိုယ်တိုင် beer တိုက်တာကစတာပဲ။ စသောက်တုံးကတော့မတည့်လို့ အလက်ဂျီထသဗျ။ နောက်မအလက်ဂျီကှိုငါမနှိင်နှိင်အောင်သောက်မယ်ဆိုတဲ့ဇွဲနဲ့ သောက်တာ ၃လလောက်နေတော့ဘာမှမဖြစ်တော.တာခုချိန်အထိပဲ။
YTU evening Diploma တက်တုံးကတော့ကျောင်းချိန် ၃နာရီမှာ ၂ နာရီဖဲရိုက် ၁နာရီ အရက်သောက် စနစ်နဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေခဲ့ဘူးတယ်။ ဖဲနိုင်တဲ့ကောင်အရက်တိုက်ကြေှးဆိုတဲ့စည်းကမ်းနဲ့ ပေါ့။ အဲဒီတုံးကအများဆုံးသွားဖြစ်တာကျောင်းနောက်ကအုတ်တံတိုင်းကိုကျော်ပြီးသွားရတဲ့မင်းဓမစိုက်ကွင်းတွေထဲကထန်းရေဆိုင်ရယ်(အဲဒီတုံးကခုလိုအိမ်ရာစီမံကိန်းတွေမရှိသေးဘူး)။ ကုလားကျောင်းကသဇင်မင်းရယ်ပေါ့။ မှတ်မိသေးတယ်သဇင်မင်းအပေါ်ထက်က special room က ဘုရားစင်နဲ့ ဗျ။ ဘုရားစင်အောက်မှာ အရက်သောက်ပြီးပေါက်ကရလျှောက်ပြော ခဲံ့တာတွေခုချိန်ပြန်တွေး၇င်ကြက်သီးတောင်ထတယ်၊
အဲဒီတုံးကအများဆုံးသောက်ဖြစ်တာ Army Rum နဲ့Whiskey ပြည်တွင်းဖြစ်တွေများတယ်။ အိမ်နားကကြက်သမားတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး BE တော့ ၁ခါသောက်ဘူးတယ်။ (ကြက်သမားဆိုတာကြက်တိုက်တဲ့လူကိုပြောတာနော်း) အဲဒီတုံးကအင်းစိန်ပန်းခြံထဲကဆိုင်မှာသွားသောက်ကြတော့အားပါးပါးတွေ့ လိုက်ရတာဆရာ့ဆရာတွေချည်းပဲဗျာ။ BE ဖန်ခွက်ကြီးနဲ့ တစ်ခွက်ကိုတခါတည်းမော့ပြီးေ၇ ၂ ငုံလောက်ကိုအာစွက်ရုံသောက်တဲ့လေးစားအားကျဖွယ်ဆရာတွေပေါ့။ BE ကိုအားကျမခံorange နဲ့ ရောပြီးကြိက်လိုက် မြေပဲပြုတ်နဲ့ မြည်းလိုက်နဲ့ တော်တော်အ၀င်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးလှိမ့်သောက်တော့တာပဲ။
ပြီးမှတရိပ်ရိပ်တက်ပြီးအန်ချင်လာလို့ ဆိုင်နောက်ကအိမ်သာကိုမနည်းရောက်အောင်သွားပြီးလေးဘက်ထောက်အန်ခဲ့ဘူးတယ်။ (သောက်ထားစားထားတာလေးတွေနှမြောသော်ငှားလည်းတက်နိုင်ဘူး) အဲဒီအချိန်ကစပြီးBEဆိုလုံးဝတို့ လို့ မ၇တော့ဘဲ BE ကိုရာသက်ပန်ဖြတ်ဖို့ှဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ (မှတ်ချက်းBE ကိုသာဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Posted by Pho La Nat Thar at 12:04 AM2comments:
Animals from Henderson Wave
ဘီယာဘူးမတွေ့ လို့ မရမကရှာနေတာဖြစ်မယ်။
Posted by Pho La Nat Thar at 2:24 AM 1 comment:
Above photo I took from Marina Barrage, itasteel Statue of woman who trying to shaking the world, The time I took the photo I tried to include the cloud asabackground. I edited the photo with photomatrix to become HDR. It my first HDR photo.
Posted by Pho La Nat Thar at 7:54 PM 1 comment:
21/12/2012 မှာကမ္ဘာမပျက်လို့ စိတ်အညစ်ကြီးညစ်နေကြတဲ့...